Tag: qorsheyn | Martech Zone
Kooxaha suuq geyntu badanaa waa koox aan kala sooc lahayn oo ka mid ah suuqleyda gudaha, ilaha wakaaladda dibadda, iyo kuwa madaxbanaan ee laga yaabo inay ka shaqeeyaan xafiisyada adduunka oo idil. Waxaan soo marnay tan oo dhufto oo ka caawiyay tan - laga bilaabo wadaagga khadka tooska ah ee la wadaago, barnaamijyada shabakadaha bulshada ee gudaha, kalandarrada la wadaago, iyo in ka badan… iyo in badan oo ka mid ah aaladaha ay leeyihiin isdhexgal, ku dhowaad qalab kasta oo suuq geynaya qalabkiisu wuxuu u egyahay sidii bahal Frankenstein halkii a
Dhibaato Blogging ah? Qorshee.
Talaado, July 26, 2011 Khamiista, Noofembar 22, 2012 Jenn Lisak Golding
Aniga ahaan shaqsi ahaan iyo Blogger xirfadle ah, waxaan dhib ku qabaa soo saarista boostada maalin kasta sababo la xiriira culeyskeyga shaqada iyo culeysyada waqtiga kale. Laakiin haddii aad rabto inaad ku guuleysato blogger ahaan, ha ahaato shaqsi ahaan ama xirfad ahaan, waa inaad ka koobnaataa saddex waxyaalood: waqtiga, ku habboonaanta. Si loogu daro mid kasta oo ka mid ah cunsurradan, waa lama huraan inaad qorshe leedahay. Waa kuwan 3 talooyin deg deg ah oo kaa caawinaya inaad si wax ku ool ah wax u qorto: 1.
Hadaadan waligaa fursad u helin, daawo filimka Hitch. Filimku waa labo sano jir, laakiin wali waa sarbeeb cajiib ah suuq geyn. Filimka, Alex Hitchens (Will Smith), wuxuu wax baraa ragga iyaga oo aan fursad u helin inay helaan gabadha ay ku riyoodaan. Talada uu bixinayo ayaa ah inuu isku dayo inuu yareeyo cilladahaaga dhalaalaya, fiiro gaar ahna u yeelo taariikhdaada, oo aad sameyso shaqada guriga. Muuqaalka ugu xusuusta badan ayaa ah xawaare-shukaansi goob ay an